ဒေါ်နယ်လ် ထရန့် - ဝီကီပီးဒီးယား
၄၅ ကြိမ်မြောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတ
(ဒေါ်နယ်ထရမ့် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဒေါ်လ်နယ် ဂျွန် ထရမ့် (အင်္ဂလိပ်: Donald John Trump မွေးရက် - ၁၄ ဇွန်လ ၁၉၄၆) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၏ ၄၅ ဦးမြောက် သမ္မတဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး သမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိတွင် သူ၏ အိမ်ခြံမြေ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း နှင့် အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္မဏီ ဖြစ်သော ထရမ့် အော်ဂနိုင်ဇေးရှင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပြီး သမ္မတ အဖြစ် တာဝန် မယူမီတွင် ထိုရာထူးမှ နုတ်ထွက်မည်ဟု ပြောကြားထားသည်။ ၎င်း၏ သက်တမ်းတလျှောက်တွင် ထရမ့်သည် ရုံးစိုက်ရာ တာဝါအဆောက်အဦးများ၊ ဟိုတယ်များ၊ ကက်စီနိုများ၊ ဂေါက်ကွင်းများ နှင့် အခြား ထင်ရှားသော အမှတ်တံဆိပ် ရှိသည့် နေရာများကို ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
ယခင် ဘာရက် အိုဘားမား
ဆက်လက် ဂျိုး ဘိုင်ဒင်
အမည်ရင်း ဒေါ်နယ်လ် ဂျွန် ထရမ့်
မွေးနေ့ (၁၉၄၆-0၆-၁၄) ဇွန် ၁၄၊ ၁၉၄၆ (အသက် ၇၅)
မွေးရပ်ဇာတိ နယူးယောက်မြို့၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ အမေရိကန်
ကြင်ဖော် အိုင်ဗန်နာ ဇယ်နစ်ကိုဗာ
ထရမ့်သည် နယူးယောက်မြို့တွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပြီး ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ပင်ဆယ်လ်ဗေးနီးယား တက္ကသိုလ် ဝှာတန်ကျောင်းမှ ဘောဂဗေဒ အထူးပြုဖြင့် ဘက်ချလာ ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ ဖရက်ဒ် ထရမ့်၏ အိမ်ခြံမြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကို စတင်ကြီးကြပ်ခဲ့ပြီး နောင်တွင် ထရမ့် အော်ဂနိုင်ဇေးရှင်းဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ကာ မကြာမီ အချိန်ကာလ အတွင်း အများပြည်သူကြားတွင် ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ ထရမ့်သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထိ ၎င်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော မယ်အမေရိက အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြား စီးရီးများတွင် တစ်ခန်းစ နှစ်ခန်းစ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ရီဖောင်းမ် ပါတီ၏ သမ္မတ လောင်းအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း မဲမပေးမီတွင် ပြန်လည်နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း အင်န်ဘီစီ ရုပ်သံတွင် အပရန်တိုက်စ် အမည်ရသော ရုပ်သံစီးရီးကို တွဲဖက် ထုတ်ဝေသူ အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖော်ဘီ၏ စာရင်းအရ ထရမ့်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် အဆင့် ၃၂၄ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် အဆင့် ၁၅၆ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ထရမ့်သည် ရီပါဘလစ်ကန်ပါတီ၏ သမ္မတလောင်း အဖြစ် ဝင်ရောက်အရွေးခံမည်ဟု ကြေငြာခဲ့ပြီး ၎င်းပါတီ၏ သမ္မတလောင်း အဖြစ် အရွေးချယ်ခံမည့်သူများတွင် ရှေ့မှ ပြေးနေခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလတွင် ရီပါဘလစ်ကန် ပါတီရှိ ၎င်း၏ ပြိုင်ဘက်များမှ မဲဆွယ်နေမှုများကို ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လတွင် ၂၀၁၆ ရီပါဘလစ်ကန် အမျိုးသား ကွန်ဗန်းရှင်းမှ ၎င်းအား ရီပါဘလစ်ကန် ပါတီအား ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်မည့် သမ္မတ လောင်း အဖြစ် တရားဝင် ကြေငြာခဲ့သည်။ ထရမ့်သည် ယခင်က မကြုံဖူးအောင် မီဒီယာ၏ အရေးစိုက်မှုကို ခံခဲ့ရပြီး နိုင်ငံတကာ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်။ အင်တာဗျူးများ၊ တွစ်တာ နှင့် မဲဆွယ်ပွဲများတွင် ပြောကြားခဲ့သော စကားများမှာ အငြင်းပွားစရာ စကား သို့မဟုတ် အမှားများ ဖြစ်သည်။ ရီပါဘလစ်ကန် ပါတီ အတွင်း သမ္မတလောင်း အဖြစ် အရွေးခံရစေရန် ပြုလုပ်သော မဲဆွယ်ပွဲအချို့တွင် ဆန္ဒပြမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုများဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်တွင် ထရမ့်မှ အမျိုးသမီးများအား အဓမ္မ ဖက်နမ်းခြင်း နှင့် ဖျစ်ညှစ်ခြင်း ပြုလုပ်သည်ကို ဝါကြွားပြောဆိုသော အသံဖိုင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး အများအပြားမှ ၎င်းတို့အား ထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ထိုအသံဖိုင် ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းမှ ၂၀၀၅ ခုနှစ် တွင် ပြောဆိုခဲ့သော စကားများကို တောင်းပန်ခဲ့သော်လည်း စွပ်စွဲမှုများကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်း စေရန် လုပ်ဆောင်သော ကန်ပိန်း၏ တစိတ်တဒေသမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထရမ့် မဲဆွယ်ရာတွင်ပြုလုပ်သော စည်းရုံးမှုများတွင် အမေရိကန်-တရုတ်တို့၏ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီမှု နှင့် နက်ဖ်တာ နှင့် ထရန် ပစိဖိတ် ပါတနာရှစ် သဘောတူညီချက် အစရှိသော ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီမှုများကို ပြန်လည် ညှိနှိုင်းမည်၊ အမေရိကန်-မက္ကဆီကို နယ်စပ်တွင် တံတိုင်းကာရံခြင်း အပါအဝင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေများကို တင်းကြပ်သွားမည်၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ပြန်လည်ပြုပြင်မည်၊ တတ်နိုင်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဥပဒေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီး အသစ်ပြန်လည် ရေးဆွဲသွားမည်၊ အခွန် လျှော့ချမည် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာလ ပါရီ တိုက်ခိုက်မှု အပြီးတွင် ထရမ့်မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ မူစလင်များ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုကို ယာယီတားမြစ်ရန် ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောင်တွင် ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်သော ရာဇဝင် ရှိသည့် နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားများကိုသာ ရည်ရွယ်ကြောင်းနှင့် အကြမ်းဖက်သမား ဖြစ်လာမည့် သူများကို စစ်ဆေးခြင်း တိုးတက်လာသည့် အချိန်အထိ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အသက် ၇၀ နှင့် သမ္မတ ဖြစ်လာသောကြောင့် သမ္မတ အဖြစ် ပထမ သက်တမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် သူများတွင် အသက် အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး ရော်နယ် ရေဂင်၏ ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် အသက် ၆၉နှစ်၌ အသက်အကြီးဆုံး သမ္မတ အဖြစ် ပထမအကြိမ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စံချိန်ကို ချိုးခဲ့သည်။ သီအိုဒိုး ရုစဗဲ ပြီးလျှင် နယူးယောက်မြို့တွင် မွေးဖွားသော ဒုတိယမြောက် သမ္မတ ဖြစ်သည်။
၃ ဖျော်ဖြေရေးနှင့် မီဒီယာ လုပ်ငန်းများ
ဖျော်ဖြေရေးနှင့် မီဒီယာ လုပ်ငန်းများ
↑ "Four women accuse Trump of forcibly groping, kissing them"၊ October 13, 2016။ October 29, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "Four women accused Donald Trump of groping or kissing them without their consent in news reports published Wednesday, just days after the Republican presidential nominee insisted inadebate that he had never engaged in such behavior. ... The news came five days after The Washington Post reported Friday ona2005 video in which Trump can be heard making vulgar comments onahot microphone about physically forcing himself on women sexually."
"US Presidential Debate Recap: Polls Split on whether Donald Trump or Hillary Clinton won Poisonous Argument," The Telegraph, 13 October 2016.
"In what was one of the most negative and acrimonious debates in US presidential history, it wasamatter of minutes before the lewd tape, in which Mr Trump brags about "grabbing p----" and forcibly kissing women, was brought up."
Tracy Jan, "More women accuse Trump of aggressive sexual behavior," Boston Globe, October 14, 2016.
"Trump has been confronted withaslew of allegations of sexual misconduct over the past week, starting withaWashington Post report ofa2005 tape featuring him bragging about forcibly kissing women and grabbing them by the genitals."
Trip Gabriel, "Abandoning Donald Trump and, for Some Women, the G.O.P., Too," The New York Times, October 27, 2016.
"Increasing numbers of Republican women have turned on their party’s male leaders for defending Mr. Trump against accusations that he groped or forcibly kissed more than 10 women."
Molly Redden, "Donald Trump 'grabbed me and went for the lips', says new accuser," The Guardian, October 16, 2016.
"On its release, the tape quickly unleashedacascade of accusations from women who have said Trump forcibly kissed or groped them, or reached under their clothing without asking."
Amanda Sakuma, "Donald Trump Surrogates Have Their Own Baggage With Women Voters" NBC News, October 26, 2016.
"newly unearthed audio recordings showed Trump bragging about forcibly kissing women and grabbing them by the genitals."
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒေါ်နယ်လ်_ထရန့်&oldid=641548" မှ ရယူရန်
၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။